FNAF UCN Apk Dhawunirodha Ye Android [Mod Game] - Luso Gamer
FNAF UCN Apk Dhawunirodha Ye Android [Mod Game]
Imwe vhezheni itsva yeFNaF yasvika pamusika uye yarova zvisingaite. Avo vari fan hombe yekutyisa uye kuita mitambo yemitambo. Inofanirwa kudhawunirodha uye kuisa yazvino yakagadziridzwa vhezheni yeFNAF UCN Apk. Iyo ichangobva kuvhurwa mumusika uye vatambi vanoda zvachose mawedzero matsva.
Kunyangwe Manheru mashanu kuFreddy's akatorova chinzvimbo chakanaka pakati pevatambi. Asi ikozvino vatambi vari kutarisira chimwe chinhu chitsva uye chakasiyana. Iko vatambi vanogona kubata zviri nyore kutonga kwakazara pamusoro pemutambo wemutambo unosanganisira animatronics.
Mashup matsva aya RPG Game inoburitswa mumusika mazuva mashoma apfuura. Zvakadaro vazhinji vevatambi veAndroid vari kunyoresa zvichemo maererano nekusasvika kwekushandisa Apk. Asi ikozvino mafeni anogona kurodha zviri nyore FNAF UCN Game kubva pano nekudzvanya kumwe chete.
Chii chinonzi FNAF UCN Apk
FNAF UCN Apk ishanduro yakagadziridzwa yeFNaF official gameplay. Iko kusafungira uye zvinhu zvinogadziridzwa kusanganisira madingindira. Saka vatambi vanogona kunakidzwa nechiitiko chechokwadi chinosanganisira kugadziridzwa kwehofisi uye chirongwa chekutiza.
Mukati mevhezheni yepamutemo, zvakawanda zvezvirambidzo zvakasiyana zvinotemerwa vatambi. Kunyangwe ivo havabvumidzwe kunakidzwa uye kutonga system yese. Kuti uwane zvidzoreso zvinogona kuda zvinhu zvakawanda, izvo zvakaiswa muzvikamu muchitoro chinorambidzwa.
Kusvika uye kunze kwekunge vatambi vabudirira kuvhura izvo zvinhu. Izvi zvaionekwa sezvisingabviri kuchengetedza chinzvimbo mukati mehofisi kwenguva refu. Saka tichifunga ese aya ma loopholes uye mazano evatambi, vagadziri vakazogadzira yakagadziridzwa vhezheni.
Iko kune anopfuura makumi mashanu uye akasiyana animatronics aripo ekusarudza. Rangarira mamwe asingadzoreki animatronics aripo kuti akuuraye. Kana iwe uchitenda kuti hurongwa hwekupukunyuka huchashanda nemazvo uye zvichitungamira mukuhwina kwakananga wobva warodha FNAF Ultra Custom Night Apk.
zita FNAF UCN
zera 151.8 MB
Package Zita com.clickteam.ultimatecustomnight
Inodiwa Android 6.0 uye Uyezve
chikamu mutambo - Action
Zvinoenderana nevagadziri, akawanda mhenyu maturusi ekugadzirisa anowedzerwa. Izvo zvinobvumira vatambi kuti vagadzirise uye kuronga yavo yavanoda anime character munguva pfupi. Zvese zvavanoda kuita kungosarudza hunhu uye kuisa zvimwe zvakakosha zvekugadzirisa zvinhu.
Vatambi vava kupihwa sarudzo yakazara yekusarudza mavara evavengi. Uyezve inogona kugadzira yakakwana combo yeakasanganiswa anime mavara. Kunyangwe nhanho yekuomerwa inogona kuyerwa kubva pa0 kusvika 20. Ingowana iyo yekushandisa shanduro yemutambo uye unakirwe nechiitiko chinotyisa.
Isu tinotenda kuti zvakakodzera kutaura nezve nzvimbo dzisina vanhu dzinotungamira iyo animatronics kuhofisi. Aya ndiwo maviri Air Vents uye Hoses, Side Main Doors uye AC Duck. Rangarira idzi nzvimbo huru dzisina vanhu dzinogona kutungamira mhondi dzakananga kuhofisi.
Chinhu chimwe chatinokanganwa kutaura ndechekudzidza nezve mashandisirwo ezvishandiso zvakasiyana. Nekuti kugonesa izvo zvinhu zvinobatsira kurarama mukati meimwe hofisi. Iyo gamer inoda kudzidza kugadzirisa AC, Simba Jenareta, Heaters uye Global Music Box.
Kunze kwekugona zvese izvi zvishandiso, iyo gamer inogona zvakare kudyara akawanda booby laser misungo. Kuisa misungo iyoyo kunobatsirawo kubvisa mhondi. Saka iwe unoda mutambo uye wakagadzirira kunakidzwa nehunyanzvi mutambo wemitambo wobva waisa FNAF UCN Yemahara Dhawunirodha Android.
Kuisa mutambo kunopa kutyisa uye chiitiko chiitiko.
Faz-Coins ingangoda kuvhura pro zvinhu.
Mari yacho inogona kuwanikwa uchitora chikamu mumutambo.
Multiple animatronics inowedzerwa.
Around 50 plus matoyi aripo ekusarudza.
Iyo yemutambo interface ine simba uye mobile-hushamwari.
Yepamberi kuseta dashboard inobatsira kugadzirisa akakosha maficha.
Maitiro ekurodha FNAF UCN Apk
Kunze uko mawebhusaiti mazhinji anoti anopa akafanana maApk mafaera emahara. Asi muchokwadi, iwo mawebhusaiti ari kupa fake uye akashatiswa mafaera. Saka chii chinofanira kuitwa nevashandisi veAroid mumamiriro ezvinhu akadaro kana vasingakwanise kuwana gwaro repamutemo?
Mune mamiriro akadai tinokurudzira avo Android gamers kushanyira webhusaiti yedu. Nekuti pano pawebhusaiti yedu tinongopa echokwadi uye epakutanga maApk mafaera. Kuisa FNAC UCN Yemahara Dhawunirodha ndapota tinya pazasi apa link.
Zvakachengeteka Kuisa Iyo Game
Iyo yekutamba application yatiri kutsigira pano ndeyepakutanga. Nekudaro, isu hatimbofa tiri vedzi copyrights uye isu hatisi kuzova nemhosva kune chero njodzi. Tisati tapa iyo Apk mukati yekurodha chikamu, isu tinoisa iyo application pamusoro pema smartphones akasiyana ekutarisa kuchengetedza.
Kusvika parizvino akawanda akasiyana akagadziridzwa eFNAF akaburitswa pano. Kuti uongorore uye unakirwe nedzimwe shanduro ndapota isa mitambo yakataurwa. Zviri FNAF Batsira Kuda Apk uye FNAF Chengetedzo Kutyora Apk.
Saka iwe unoda iyi nyowani yakagadziridzwa vhezheni yeFNaF uye wakagadzirira kuitamba neshamwari. Zvino wakamirirei? Ingo dhawunirodha yazvino vhezheni yeFNAF UCN Apk. Izvo zvinosvikika kuwana kubva pazasi yakapihwa download link bhatani.
Categories Action, Games Tags FNAF UCN Apk, FNAF UCN Yemahara Dhawunirodha, FNAF UCN Yemahara Dhawunirodha Android, FNAF UCN Game, RPG Game Post navigation
Gimy TV Apk 2022 Dhawunirodha Yemahara Ye Android [Yakagadziridzwa]
Game Turbo Xiaomi Apk Dhawunirodha Ye Android [Tool]